Ndị ọka iwu International ICT na Netherlands - Law & More
N'ihi mepụtara ịntanetị, ọtụtụ ajụjụ gbasara iwu ebilitewo. Nke a bụ itinye iwu nke ICT. Iwu ICT nwere ọtụtụ ihe dị na mpaghara ndị ọzọ nke iwu, dị ka iwu nkwekọrịta, iwu nzuzo na iwu nke ọgụgụ isi. N'ime usoro iwu niile ndị a, ajụjụ gbasara iwu ICT nwere ike ibilite. Ajụjụ ndị a nwere ike ịbụ ihe ndị a: ‘ọ ga-ekwe omume ịlaghachi ihe m zụtara na ịntanetị?’, ‘Gịnị bụ ikike m mgbe m na-eji ịntanetị na olee otu esi echedo ikike ndị a?’ na 'enwere ike itinye ihe dị n'ịntanetị m n'okpuru iwu nwebiisinka?' Agbanyeghị, iwu ICT n’onwe ya nwekwara ike ikewa n’ebe ụfọdụ akọwapụtara maka iwu ICT, dị ka iwu sọftụwia, iwu nchekwa na azụmahịa e-commerce.
N'AGBAS OF OBI Iwu ITC?
N'ihi mepụtara ịntanetị, ọtụtụ ajụjụ gbasara iwu ebilitewo.
> Iwu nchekwa
> SAAS & Igwe ojii
> Nkwekọrịta IT
> Atụmatụ na-aga n'ihu & Escrow
> Iwu ụlọ ahịa weebụ
> Nchịkọta & Nchịkọta
> Iwu ngwanro
> Ngwunye Nrụ Ọrụ
Nke a bụ itinye iwu nke ICT. Iwu ICT nwere ọtụtụ ihe dị na mpaghara ndị ọzọ nke iwu, dị ka iwu nkwekọrịta, iwu nzuzo na iwu nke ọgụgụ isi. N'ime usoro iwu niile ndị a, ajụjụ gbasara iwu ICT nwere ike ibilite. Ajụjụ ndị a nwere ike ịbụ ihe ndị a: ‘enwere ike ịlaghachi ihe m zụtara na ịntanetị?’, ‘Gịnị bụ ikike m mgbe m na-eji ịntanetị na olee otu esi echedo ikike ndị a?’ na 'enwere ike itinye ihe dị n'ịntanetị m n'okpuru iwu nwebiisinka?' Agbanyeghị, iwu ICT n’onwe ya nwekwara ike ikewa n’ebe ụfọdụ akọwapụtara maka iwu ICT, dị ka iwu sọftụwia, iwu nchekwa na azụmahịa e-commerce.
Otu nke Law & More nwere ihe omuma doro anya banyere iwu nke teknụzụ na mpaghara gbasara iwu nke nwere njikọ na iwu ICT. Yabụ, ndị ọka iwu anyị nwere ike inye gị ndụmọdụ gbasara isiokwu ndị a:
• iwu nchekwa;
• SaaS na igwe ojii;
• nkwekọrịta IT;
• ity na-aga n'ihu na usoro escrow;
• Iwu Webshop;
• ọnọdụ ngalaba;
• iwu sọftụwia;
• sọftụwia mepee emepe;
• sọftụzụ mmepụta.
Iwu Nche bụ mpaghara iwu nke metụtara nchedo ozi. Isiokwu ndị a na-adịghị ahụkebe n'ihe iwu a gụnyere nje kọmputa, nchụpụ kọmputa, hacking na nnabata nke data. Iji chekwaa ozi nzuzo ma nwekwa nzuzo, enwere usoro nke ị ga - elele. Iji maa atụ, ụlọ ọrụ n’onwe ha na-ejikarị usoro iwu akwadoghị dabere na nyocha ihe egwu. Agbanyeghị, nchedo a nwekwara usoro iwu. A sị ka e kwuwe, ọ bụ onye omebe iwu na-ekpebi etu usoro nchekwa ndị a kwesịrị ịdị.
Mgbe ị na-eche usoro ịmebe iwu mmadụ nwekwara ike iche maka 'Wet besoonsgegevens' (Iwu Nchedo Data nkeonwe). Iwu Nchedo nkeonwe na-ekwupụta na ọ ga-enwerịrị nke ọma ihe ndị eweregoro iji chedo data nkeonwe megide mfu ma ọ bụ nhazi iwu na-akwadoghị. Nke a nwere ike ịgụnye njikọ ezoro ezo n'etiti sava na onye ọbịa: njikọ SSL. Okwuntughe bụkwa akụkụ nke nchekwa dị otú ahụ.
Na mgbakwunye na Iwu Nchedo Nkeonwe, ụfọdụ na-emebi iwu. Ntaramahuhuhuhu bu ntaramahụhụ dabere na edemede nke 128ab nke Usoro Mpụ Dutch.
Iji kpuchido ozi gị, ọ dị mkpa ịmara otu nchekwa ozi si arụ ọrụ yana otu esi echebe nchekwa nke gị na data onye ọzọ na nchekwa ọ bụla enwere ike. Law & More nwere ike inye gị ndụmọdụ nkwekọrịta gbasara iwu gbasara nchekwa ozi.
SAAS & Igwe ojii
Sọftụwia dịka Ọrụ, ma ọ bụ SaaS, bụ sọftụwia a na-enye ka enye ọrụ. Maka ụdị ọrụ a, onye ọrụ ahụ adịghị mkpa ịzụta sọftụwia ahụ, mana enwere ike ịnweta SaaS na ịntanetị. Uru nke ọrụ SaaS bụ na ụgwọ ọrụ maka onye ọrụ dị ala.
Ọrụ SaaS dị ka Dropbox bụ ọrụ igwe ojii. Ọrụ igwe ojii bụ netwọ ebe a na-echekwa ozi na igwe ojii. Onye ọrụ abụghị onye ojii nke na ọ bụ ya kpatara ya maka ndozi ya. Onye na-eweta igwe ojii mara maka igwe ojii. A ga-ejikwa usoro igwe ojii na usoro ụfọdụ, nke bụ nke bụ iwu metụtara nzuzo.
Law & More nwere ike inye gị ndụmọdụ na SaaS na ọrụ igwe ojii. Ndị ọka iwu anyị nwere ihe ọmụma na ahụmịhe na ngalaba iwu a, n'ihi nke ha nwere ike ịnyere gị aka n'ajụjụ gị niile.
N'ihi ụwa dijitalụ anyị, ọtụtụ ụlọ ọrụ agbakwunyerela na ịrụ ọrụ nke teknụzụ ozi ziri ezi. N'ihi mmepe a, ọ na-abawanye uru inwe ụfọdụ ihe IT nwere nhazi nke ọma. Dịka ọmụmaatụ, maka ịzụta ngwaike ma ọ bụ ikikere ngwanro, nkwekọrịta IT kwesịrị ịdepụta.
Nkwekọrịta IT dị, dị ka aha ahụ na-egosi, ọ dịghị ihe na-erughị nkwekọrịta “oge ọ bụla” dị ka ọnọdụ ịzụta izugbe, nkwupụta nzuzo, nkwekọrịta ọrụ, nkwekọrịta ngwanrọ, nkwekọrịta SaaS, nkwekọrịta igwe ojii na nkwekọrịta escrow. N'ime nkwekọrịta dị otú a, a na-eme nkwekọrịta maka ọmụmaatụ, ọnụahịa, akwụkwọ ikike nke ma ọ bụ ụgwọ dị na ya ma ọ bụ na-arụ ọrụ dị mma.
Enwere ike inwe nsogbu mgbe ị na-edegharị ma ọ bụ na-agbaso nkwekọrịta IT. N'ebe ahụ, dịka ọmụmaatụ, nwere ike ịbụ ejighị n'aka maka ihe aga-ebuga ma ọ bụ n'okpuru usoro akọwapụtara. Ọ dị mkpa na a na-eme nhazi doro anya yana edepụtara nhazi ndị a na nkwekọrịta.
Law & More nwere ike nye gị ndụmọdụ na nkwekọrịta IT gị niile. Anyị ga-enyocha ọnọdụ gị ma nwee ike ịhazi nkwekọrịta omenala nke ezigbo ụda iji gboo mkpa gị.
Atụmatụ na-aga n'ihu & Escrow
Maka ndị ọrụ nke teknụzụ ozi ọ dị mkpa na ha nwere ike ijide n'aka na enwere ike iji software ha na data ha. Usoro na-aga n'ihu na-enye aka idozi nsogbu. A ga-emezigharị atụmatụ dị otú a, site na nkwado na ndị na-ahụ maka ọrụ IT. Nke a pụtara na, maka ọmụmaatụ ịkwụ ụgwọ, enwere ike ịga n’ihu ọrụ IT.
Maka nzube maka ịmalite usoro, ọ ga-adị mkpa ileba anya n'ụdị ọrụ IT. Mgbe ụfọdụ usoro koodu escrow ga-ezu, ma n'ọnọdụ ndị ọzọ ọ ga-adị mkpa ịme nhazi ndị ọzọ. Maka oge nke igwe ojii ga-eburu n'uche, ị ga-eburu n'uche ndị na-ebunye ya na ndị na-eweta ndị ọbịa.
Usoro inwe usoro dị mkpa maka ijigide data gị. Law & More nwere ike inye gị ndụmọdụ maka atụmatụ ị ga n'ihu. Anyị nwere ike inyere gị aka ịhazi ụdị atụmatụ a iji chebe ngwanrọ na data gị.
Iwu ụlọ ahịa weebụ
Webụbụbụbụbụbụbụlụ ọnụ na-eme ọtụtụ ọnụọgụ iwu nke ha kwesịrị ime. Purchasezụta anya, ikike ndị ahịa, iwu kuki, ntuziaka Europe na ọtụtụ ndị ọzọ bụ akụkụ dị mkpa iwu nke webshop ga-eche ihu. Okwu ahụ 'iwu ụlọ ahịa weebụ' na-ewepụta oge niile.
N'ihi ọtụtụ iwu, ọ nwere ike bụrụ na ị nwere oge “ịgaghị ahụ osisi maka osisi”. Ekwesịrị m iji usoro na ọnọdụ? Kedu ka icheta site n’aka onye ahịa si arụ ọrụ? Kedu ozi m ga-enye na weebụsaịtị m? Kedu iwu dị na ịkwụ ụgwọ? Kedu maka iwu kuki ahụ? Kedu ihe m ga-eme na data nkeonwe m nwetara site na ụlọ ahịa weebụ m? Nke a bụ nhọrọ nke ajụjụ nke enwere ike ihu onye nwe ụlọ ahịa weebụ.
Ọ dị mkpa ka emezie ihe ndị a nke ọma. Ma ọ bụghị ya, ịnwere ike itinye ego ntaramahụhụ. Iwu ego ndị a nwere ike iru ogo dị elu ma nwee mmetụta na ụlọ ọrụ gị. Informedmata nke ọma n'ihe ndị a ga-ebelata ihe egwu gị.
Law & More nwere ike nye gị ndụmọdụ maka nrube isi gị n'iwu dị mkpa. Ọzọkwa, anyị nwere ike inyere gị aka ịhazi akwụkwọ iwu dị mkpa maka ụlọ ahịa weebụ gị.
Nchịkọta & Nchịkọta
Mgbe mmadụ nabatara ma ọ bụ chọọ ịnabata websaịtị, mmadụ ga-eburu n'uche iwu ndị enyere n'iwu. Mgbe ị na-akwado weebụsaịtị, a ga-echekwa data ma mgbe ụfọdụ gafere. Ọ dị mkpa ịmara otu ịchọrọ isi lebara onye ahịa gị anya, kamakwa n'akụkụ ndị nke atọ.
You ga-enwe okwu doro anya gbasara nnabata gị na akụkụ iwu ya. Ọ dị mkpa ka ndị ahịa mara ihe na-eme na data ha. Ndị ahịa na-achọpụta na ọ dị mkpa na ejiri data kpuchie nke ọma. Ọ dịkwa mkpa ịmara onye ga-akwụ ụgwọ mgbe emebi iwu data.
Achọrọ ka i chebe nzuzo nke ndị ahịa gị? Ikwesiri ịnye ozi ịkpọtụrụ ma ndị uwe ojii rịọ gị? You nwere ọrụ maka nchekwa data na mmebi data? Ndị ọka iwu anyị nwere ike ịza ajụjụ ndị a niile na ajụjụ ndị ọzọ. Nwere ike ị nwere ajụjụ ọ bụla, ị nwere ike ịkpọtụrụ otu n'ime ndị ọka iwu nke Law & More.
N'oge a, ọ gaghị abụ ihe enweghị ike ibi n'ụwa nke enweghị ngwanrọ. Iwu ngwanrọ dị mkpa maka ndị mmepe software na ndị ọrụ ngwanrọ.
'Auteurswet' (nke nwebisiinka) na-akọwapụta onye nwere ụfọdụ sọftụwia. Na omume, ka odi, obughi ihe doro anya mgbe nile bu onye nwere sọftụwia a, yabụ ya nwe nwe okike a. Ndị na - eme ngwanrọ ndị na - ere ngwaahịa ha, na - achọkarị ijide ikike okike ha. Nke a na - egbochi ohere ndị ọrụ sọftụ wee gbanwee ngwanro. Ọ na - agbakwu mgbagwoju anya mgbe onye ọrụ chọrọ ịmepụta (nke onwe) sọftụwia. Nye ga-enweta nwebiputa ihe?
Iji gbochie nsogbu ị na-enwe, ọ dị mkpa tupu i buru ụzọ kọwaa onye ga-enweta akwụkwọ ikike ahụ. Law & More nwere ike inye gị ndụmọdụ gbasara iwu sọftụwia ma nwee ike ịza ajụjụ gị gbasara ngalaba iwu a.
N'ihe banyere ngwanrọ mmeghe, onye ọrụ na-enweta koodu isi nke ngwanrọ ahụ mgbe ịzụrụ ikike. Nke a nwere uru ndị ọrụ nwere ike hazie ma melite ngwanrọ a ka sọftụwia na-aga n’ihu. Na ntụnye, nke a, n'ezie ọ na-aba uru ma bara uru: onye ọ bụla nke maara ama nke koodu nwere ike idezi ngwanrọ mepere emepe.
Na omume, agbanyeghị, ọ dị ezigbo mkpa ịhazi iwu ụfọdụ maka ojiji nke sọftụwia isi, iji hazie ma dowaa ojiji nke sọftụwia na-emeghe. Nke a dị mkpa karị ugbu a na enwere ntakịrị nlekọta, ebe ana-atụnye ọtụtụ mkpesa maka mmebi nke ikikere ngwanrọ mmeghe.
Law & More nwere ike nye gị ndụmọdụ na ngwanrọ mepere emepe. Ga-abụ onye nwe ngwanrọ ị mepụtara mgbe ị na-eji sọftụwia isi mmalite? Kedu usoro na ọnọdụ ị nwere ike idobe maka iji ikikere? Kedụ ka ị ga-esi nye nkwupụta mgbe e mebiri ikike gị? Ndị a bụ ajụjụ nke otu n'ime ndị ọka iwu anyị nwere ike ịza.
Ngwunye Nrụ Ọrụ
Ọ bụghị naanị na eji software na ọfịs, kamakwa na ụlọ ọrụ. Ngwa na akụrụngwa nwere ngwaọrụ ma ọ bụ igwe eji hapụta ihe. Edere ngwanrọ a gụnyere ijikwa igwe ma ọ bụ ngwaahịa. Ihe atụ nke ụdị sọftụwia a nwere ike ịchọta n’igwe igwe, ọkụ okporo ụzọ na ụgbọ ala.
Dịka ọ dị mkpa na sọftụwia 'nkịtị', iwu ngwanrọ (ụlọ ọrụ mmepụta ihe) dịkwa mkpa na ngwanrọ nke ụlọ ọrụ ma na-enye iwu dị mkpa maka ma ndị mmepe ngwanrọ na ndị ọrụ ngwanrọ. Softwarelọ ọrụ ngwanrọ nke ụlọ ọrụ na-enweta ọtụtụ ego itinye ego, nke a na-eme ka ọ dị mkpa iji chekwaa nwebiisinka dị mkpa.